नेकपा सचिवालय बैठकमा खनाल, नेपाल र गौतमले के भने ? – rastriyakhabar.com
नेकपा सचिवालय बैठकमा खनाल, नेपाल र गौतमले के भने ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा आज अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पछि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले त्यसपछि छोटोमा आफ्नो कुरा राखेका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले पार्टी एकता कायम गर्नका लागि विधि र पद्दती अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नो कुरा नराखेका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीभित्र विचार, विधि र पद्दतीमा समस्या भएको बताए । उनले पार्टीलाई विधि र पद्दतीबाट सञ्चालन गर्दा फुटबाट बचाउन सकिने तर्क गरे । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीभित्र विचार, विधि र पद्दतीमा समस्या छ । समस्या समाधानका लागि नियम अनुसारबाट पार्टी चल्नुपर्छ । विधि र पद्दतीलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फुटको आधार बनाइएको छैन । सकेसम्म सहमतिमा जानुपर्छ, भएन भने बहुमतबाट समस्या समाधान गरेर जाने नै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको उदाहरण हो ।’
खनालपछि बोलेका अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सुरुवातमै महासचिवले दुई अध्यक्षलाई छलफल गर्न समय दिनुपर्ने बताएको कुराप्रति कटाक्ष हाने । उनले भने, ‘यो दुई अध्यक्षको मात्र संकट हो ? दुईजनाले समाधान गरेर हुँदैन । अब पार्टीले विधिसंगत तरिकाले निर्णय गर्नुपर्छ । सोच, कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटी छन् । पार्टी संगठनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।’
नेता नेपालले ओलीलाई विगतमा नेकपा मालेमा हुँदाको समय पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘पार्टीमा विवाद हुन्छ । नेकपा मालेमा हामी हुँदा विवाद थिएन ? प्रस्ताव च्याताच्यात, माइनुट तानातान भएको होइन ? त्यसैलाई आधार बनाएर पार्टी फुट्यो ? पार्टी फुटाउन पाइँदैन । विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
त्यसपछि छोटोमा आफ्नो कुरा राखेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि ओलीलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘बैठक बस्न पनि सहमति चाहिँने ? एकजनाले पनि बैठक बोलाउनु पर्यो भनेमा बोलाउनु पर्छ । हामीले त बहुमत सदस्यले भन्दासमेत बसेन । बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । पार्टीलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । तपाईँले पनि आज प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ अब बैठकमा छलफल गरेर निकास निकालौँ । विधि र पद्दतीको विकल्प छैन ।’
त्यसपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखे । छोटोमा आफ्नो धारणा राखेका श्रेष्ठले पार्टी एकता कायम गर्नका लागि विधि र पद्दती अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।